Ojiji onyonyo n'ime ọdịnaya na mmetụta ya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọchụchọ na azụmahịa
Ihe niile gbasara ihe onyonyo a
Izu ole ma ole ma obu na m n’agha bugoro onye isi m ka o mejuputa mmefu ego nke foto a. Enweghị mpempe akwụkwọ anyị na-ekesa maka onwe anyị ma ọ bụ ndị ahịa anyị nke na-enweghị ụdị nnọchi anya nnọchi anya, eserese, ma ọ bụ nke a na-ekenye ya. Anyị maara, na Martech Zone, na mgbe anyị na-ahọrọ ọmarịcha ihe iji mee ka ihe anyị na-ekwu gafee, ọtụtụ ndị ọbịa na-agụ, nwekọrịta karịa, ma na-ekwu okwu banyere ọdịnaya ahụ. Ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike n'oge a na foto bara uru otu puku okwu ka ị na-emepe ọdịnaya gị.
Ihe oyiyi na-eme ka ihe niile dị mma. Nke ahụ bụ ihe dị mma, na-atụle etu ọtụtụ nnukwu mgbanwe na mgbasa ozi mgbasa ozi si etinye ugbu a na-ekwusi ike na iji foto dị elu na ọdịnaya. Ego ole ka ịgbakwunye ihe oyiyi na ọdịnaya gị dị mkpa? Ma eleghị anya, ọtụtụ ihe karịa ka ị na-eche.
Ọ bụ ezie na anyị maara na ọ bụ eziokwu na Martech Zone, enwere ihe akaebe na-egosi na onyonyo bụ isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma mgbe ị na-ede ma na-ekesa ọdịnaya na weebụ.
Ihe niile gbasara ihe onyonyo a by Mgbasa Ozi MDG
Tags: content Marketingiji ihe oyiyioyiyiinstagramistockphotonchọta mpaghara
I Kwesịrị Iwube Mobile Mobile ma ọ bụ Mobile Mobile?
Mepụta weebụsaịtị, Mara Mma na Nkeji